Nagu saabsan - Teknolojiyada Muuqaalka Muuqaalka ee Co., Ltd.
QALABKA FARSAMADA FARSAMADA CO., LTD
Pipe Display Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2006 ilaa waqtigaasna waxaan u soo saarnay soo saare caan ah oo ah LCD iyo alaabooyinka soo bandhigga LED, oo ay ku jiraan kormeerayaasha ciyaaraha, kormeerayaasha CCTV, kormeerayaasha aragtida Dadweynaha, Kombiyuutarada All-In-One, Digital Signage iyo Boodhadhka Isdhexgalka. Iyada oo leh warshad 15,000 m2, 2 otomaatig ah iyo 1 khadadka wax soo saarka gacanta waxaan leenahay karti wax soo saar oo dhan hal milyan oo unug sanadkiiba. Ballaarinta socota awgeed waxaan dhowaan u guuri doonnaa warshad cusub oo aad u ballaaran, iyada oo kordhin doonta awooddeena in ka badan laba milyan oo unug sanadkiiba
Waxaan ku bixinaa qadar aad u badan oo ka mid ah dakhliyadayada ku jira Cilmi baarista iyo Horumarinta waxaanan ku kalsoonahay inaan soo bandhigno qaar ka mid ah kormeerayaasha ugu wanaagsan uguna soo bandhigno alaabada laga heli karo adduunka. Waxaan si joogto ah ugu dadaalnaa inaan hal-abuurno oo aan sifeyno wax soo saarkayaga wax soo saar, iyada oo alaabooyin cusub si joogto ah loo bixiyo. Khubaradeenna khibradda u leh R&D waxay si joogto ah uga shaqeynayaan naqshadeynta alaabooyinka aad macmiilku u baahan tahay oo aad rabto. Waxaan sidoo kale bixinaa adeegyo OEM iyo ODM oo buuxa, markaa haddii aad u baahato badeecad gaar ah waxaan ku kalsoonahay inaan kuu qorsheyn karno oo kuu soo saari karno.
Waxaan ku faaneynaa inaanan ahayn kuwa ugu jaban suuqa maadaama aan aaminsanahay inay tahay inaan dhisno ama soo saarno wax tayo leh, oo aan hoos ugu dhicin qiime! Iyadoo taas maskaxda lagu hayo waxaan isticmaalnaa oo kaliya alaabta ceeriin ee ugu tayada fiican, laga soo bilaabo darbiyada ilaa hoos ilaa kuwa iska caabinta.
Shirkadeenu waxay gaadhay heerarkii ugu dambeeyay ee ISO, oo ay ka mid yihiin ISO9001: 2015 iyo ISO14001: 2015, markaa waad nala shaqeyn kartaa si kalsooni leh. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan alaabooyinkeennu waxay leeyihiin CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, shahaadada WEEE iyo Energy Star, iyo shahaadada UL ayaa lagu heli karaa lacag.
Falsafadeena ganacsiga waxay ku saleysan tahay 4 mabaadi'da muhiimka ah - Hufnaan, Hal-abuurnimo, Tayo iyo Adeeg
Hamigeennu waa inaan noqono shirkad horseed u ah soo saarista wax soo saarka adduunka, waxaan aaminsanahay inaan ku soconno jidka lagu gaarayo himiladan.